सानिमा बैंकको कात्तिक ३० देखि दुई अर्बको ऋणपत्र खुल्दै, ब्याजदर कति ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सानिमा बैंकको कात्तिक ३० देखि दुई अर्बको ऋणपत्र खुल्दै, ब्याजदर कति ?
काठमाडौं । सानिमा बैंकले कार्तिक ३० गते देखि दश वर्ष अवधिको दुई अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ दरमा २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो ।
यस ऋणपत्रमा मंसिर ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यो अवधिमा आवश्यक मात्रामा ऋणपत्र नबिकेमा पुस १ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ । ऋणपत्रका लागि बिक्री प्रबन्धक काठमाडौं क्यापिटल कमलादी, काठमाडौं तथा सनिमा बैंकको सम्पूर्ण शाखाबाट आवेदन दिन पाइन्छ ।
कुल २० लाख कित्तामध्ये ३ लाख ८० हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी १६ लाख कित्ता व्यक्तिगत रुपमा जारी हुनेछ । सर्वसाधारणले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख ८० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।
रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सानिमाको यो ऋणपत्रलाई न्यून कर्जा जोखिम जनाउने रेटिङ दिएको छ । यो ऋणपत्रमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाइनेछ । आर्थिक वर्षको प्रत्येक ६ महिनाको अन्त्यपछि ब्याज भुक्तानी हुने बैंकले जनाएको छ ।